Chelsea oo wakiilo daawada u dirtay bedelka Ashley Cole. - Caasimada Online
Home Warar Chelsea oo wakiilo daawada u dirtay bedelka Ashley Cole.
Chelsea oo wakiilo daawada u dirtay bedelka Ashley Cole.
Chelsea ayaa wakiilo daawada u dirtay daafaca bidix ee xulka Switzerland iyo kooxda Wolfsburg Ricardo Rodriguez, kaasoo ay u aragto bedelka Ashley Cole, sida uu qoray wargeyska Daily Mirror.
Rodriguez, oo 20 jir ah ayaa qandaraas ilaa 2015ka ah kula jira kooxdiisa kooxo dhowr ah oo ay ka mid tahay AC Milan ayaana horay dalab ugu diray xidigaan.
Chelsea ayaa dooneysa inay hesho daafac dambeedka bidix ka ciyaara iyadooo uu qandaraaska Ashley Cole dhacaayo dhamaadka xagaaga waxayna sidoo kale arkaan horumarka fiican ee uu sameynaayo Ryan Bertrand
Cole ayaana lala xiriirinayaa inuu ka tago kooxda ka dhisan galbeedka London maadaama sharciga cusub ee Roman Abramovich uusan kooxda u ogleyn inay wax ka badan sanad qandaraas ah siido ciyaaryahan ay da’diisu ka weyn tahay 30 sano halka uu Cole diiday halkii sano ee qandaraaska loosoo bandhigay.
Real Madrid, PSG, Manchester United iyo Manchesheter City ayaana doonaya inay Janaayo la wareegaan daafacii hore ee Arsenal.
Halka ay the Blues dooneyso inay Ryan Bertrand booska kula tartan siiyaan daafacaan kooxda Wolfsburg Ricardo Rodriguez.